ဘယ်သန် လေးလား ညာသန် လေးလား!!! – Burmese Baby
Web Master | February 17, 2017 | Articles, Education | Comments
ညာသန် ကလေးများသည် ကလေး အားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ရှိပြီး ဘယ်သန် ကလေးများသည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိသည်ဟု လေ့လာချက် များက ဆိုသည်။
နှစ်ဘက် သန်သော ကလေးများ သည် ၁ရာခိုင်နှုန်း ပင် မပြည့် ဟုဆိုသည်။ အဖေ နှင့် အမေ သည် နှစ်ဦးစလုံး ဘယ်သန်ဖြစ်သည် ဆိုပါက သားသမီး ဘယ်သန့် ဖြစ်ရန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဘယ်သန် ဖြစ်ခြင်းသည် မျိုးရိုးလိုက်သည် ဟုလည်း တိကျသော သက်သေ ပြချက်မရှိပေ။ ညာသန် အဖေနှင့် အမေ တွင်လည်း ဘယ်သန် ကလေးတစ်ဦး ရှိနေနိုင်သည်။
ညာသန် များအတွက် ဟုဆိုရ လောက်သော ကမ္ဘာတွင် ဘယ်သန်များ အဖို့နေရသည်မှာ သိပ် အဆင်မပြေလှပေ။ ကျောင်းနေကလေးများ အဖို့ စာရေးစာပွဲခုံ အချို့ သည် စာရေး လက်တင် ပြုရန် အတွက် ဖြစ်ရာ ဘယ်နှင့်ရေးသော ကလေးများမှာ အဆင်မပြေလှပေ။
ဘယ် သန်ဖြစ်တိုင်း အားငယ် စရာတော့ မဟုတ်။ ဘယ်သန်များ သည် ညာသန်များ ထက် ဥာဏ်ရည် ဥာဏ်သွေး ကြွယ်ဝကြောင်း သက်သေပြချက် အများအပြား ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန် သမ္မတ များဖြစ်သော ဘားရက် အိုဘာမား ဘီကလင်တန် နှင့် ဂျော့ ဒဗလျူ ဘုရ်ှ တို့ မှာ ဘယ်သန်များ ဖြစ်ကြပြီး ဂျူးလိယက်ဆီဇာ နပိုလီယံ စသည့် အကျော် အမော် များမှာလည်း ဘယ်သန်များပင်ဖြစ်သည်။
ဘယ်သန် ကလေးများ အတွက်ပို၍ သက်သောင့် သက်သာ ဖြစ်စေ သော ပတ်ဝန်းကျင်အား ဝိုင်းဝန်း ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြင့် လက်တွဲ ခေါ်ယူကြပါစို့။
၁။ ဘယ်သန် ကလေးကို စာရေးခုံတန်း၏ ဘယ်ဘက်အစွန်မှာ ပေးထိုင်ပါ။
၂။ ဘယ်သန် ကလေး များကိုလည်း ခဲတံကိုင်ပုံ စာရေးပုံ အနေအထားများကို သင်ပြပေးပါ။
၃။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဘယ်သန် အဖေ အမေ သို့မဟုတ် ဘယ်သန် ဆရာ ဆရာမ တစ်ဦးဦး က စာရေးပုံကို စတင် သင်ကြားပေးပါ။
Credit : အောင်ငြိမ်းဝင်း (Child Health Myanmar Page)
Picture – Credits to Google.
“အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ ချစ်ဝေမျှ” တဲ့ ဖေဖေများဖြစ်ဖို့ ….